Patent kale oo Apple ah oo bixiya tilmaamo ku saabsan Software-ka Wadista Gawaarida | Waxaan ka socdaa mac
Patent-ku wuxuu noqon karaa shucaac iftiin ah talaabooyinka xiga ee Apple ama ku sii nagaan karo, shati diiwaangashan. Waqtiga la dhaafana waxaa la muujiyay in Apple wuxuu ka mid yahay shirkadaha diiwaan geliya shatiyada ugu badan sanadba sanadka ka dambeeya xaga tikniyoolajiyadda, laakiin in la fuliyo iyo in kale waa arrin kale.
Xaaladdan oo kale patent-ka soo ifaya wuxuu si toos ah u muujiyaa nidaamka wadista iskiis u shaqeysta inay horumarinayeen in muddo ah waana wax horay looga wada hadlay munaasabadihii hore iyadoo shatigan la siiyay qeyb kale oo ka mid ah tikniyoolajiyadda ay rajeynayaan inay ka hirgeliyaan gawaarida.
Waqtiga ayaa laga gudbay markii ay xantaasi ka hadlaysay mashruuc baabuur iskiis u madaxbanaan oo Apple lafteeda ah, shirkada lafteedu waxay ku andacootay inay mashruucan niyada ku hayaan markii dambena ay la xiriireen inay u dhaafeen inay diirada saaraan. software casri ah oo loogu talagalay baabuur kasta oo nooc kasta ah.
Xaaladdan oo kale Patent-ka waxay muujineysaa la socodka jidadka iyo hirgelinta dareemayaasha isticmaalkooda. Mar aan sii fogeyn ayaan aragnay sida LIDAR (a shidma loo adeegsaday gawaarida iswada si ay u arki karaan deegaanka isla markaana ay naftooda u kaxeyn karaan, iyadoo la adeegsanayo radaarro, kaamirooyin fiidiyow ah oo aad u qeexan iyo wixii la mid ah) oo ka yimid Apple ayaa xoogaa ka casrisanaa dhanka dareemayaasha iyo awooda wax ka barashada waxa ay arkayaan waa hal tillaabo oo dheeri ah qaybtaan softiweer iyo qalab.
Apple waxay sii wadaa inay ka shaqeyso nidaamkan caqliga badan tanna waxaa laga dhex arki karaa dhamaan shatiyadaha iyo wararka cusub ee gaaraya warbaahinta waqti kadib. Aynu rajaynno inay dhowaan Apple lafteedu na siin doonto faahfaahin dheeri ah oo dhab ah oo ku saabsan shaqada ay qabanayaan iyo inaysan waqti dheer ku qaadan inay si rasmi ah u bilaabaan. Maskaxda ku hay in mar horeba ay jiraan gawaari madax-bannaan ama nus-madax-bannaan oo suuqa yaal, sidaa darteed waqti dheer kuma qaadaneyso Apple inay soo bandhigto ama ka bilowdo tikniyoolajiyadan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Patent kale oo Apple oo bixiya tilmaamo ku saabsan Software-ka Gawaarida Gawaarida
Runtu waxay tahay inaan jeclahay astaamahaas waaweyn ee leh miisaaniyad ballaaran oo ka shaqeysa teknoolojiyadaan.
5ta talaabo ee ugu horeysa ee kuwa nasiibka u helay Mac cusub
Mar labaad oo la soo bandhigo ciyaarta, Qarsoodiga Crystal Portal